Ekukholelweni kwakho kuNkulunkulu, iyiphi indlela okumele wazi ngayo uNkulunkulu? Kumele wazi uNkulunkulu ngokusekelwe emazwini nasemsebenzini Wakhe wanamuhla, ngaphandle kokuchezuka noma inkolelo-mbono, futhi ngaphambi kwakho konke kumele uqale wazi umsebenzi kaNkulunkulu. Lokhu kuyisisekelo sokwazi uNkulunkulu. Zonke lezi zinkolelo-mibono ezingenakho ukwamukeleka okuhlanzekile kwamazwi kaNkulunkulu ziyimibono yenkolo, ziwukwamukela okulahlekisayo nokunamaphutha. Osaziwayo kwezenkolo bawompetha kakhulu ekuthatha amazwi kaNkulunkulu ayemukelekile endulo bese beqhathanisa amazwi kaNkulunkulu anamuhla nawo. Uma ngesikhathi sokusebenzela uNkulunkulu namuhla, unamathela ezintweni ezazikhanyiswe uMoya oNgcwele kudala, khona-ke umsebenzi wakho uzoba ngophazamisayo, kanti nokwenzayo kuzophelelwa isikhathi futhi akunakuba okunye ngaphandle kwenkonzo yenkolo nje. Uma ukholelwa ukuthi labo abasebenzela uNkulunkulu kumele babe nentobeko nokubekezela ngaphandle…, futhi uma uthatha lolu hlobo lolwazi ulwenze namuhla, khona-ke lolo lwazi lungumbono wenkolo, futhi ukwenza kanjalo kuba ukwenza kokuzenzisa. “Imibono yenkolo” ibhekisela ezintweni eziphelelwe isikhathi nokungasasebenzi namuhla (okubandakanya ukwamukela amazwi akhulunywa uNkulunkulu ngaphambilini kanye nokukhanya okudalulwe ngokuqondile uMoya oNgcwele), futhi uma kwenziwa namuhla, khona-ke kuba yiziphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu, futhi akunanzuzo kumuntu. Uma umuntu ehluleka ukususa lezo zinto ezingaphakathi kuye eziyimibono yenkolo, khona-ke zizoba yisithiyo esikhulu ekutheni umuntu asebenzele uNkulunkulu. Abantu abanemibono yenkolo abanayo indlela yokuhambisana nezinyathelo zomsebenzi woMoya oNgcwele, basilele emuva ngesinyathelo esisodwa, bese ziba zimbili—ngoba le mibono yenkolo yenza umuntu azibone engolunge ngokweqile futhi abe nenkani. UNkulunkulu akakulangazeleli lokho akukhuluma nakwenza endulo; uma kungasasebenzi namuhla, khona-ke uyakususa. Ingabe uzokwazi ngempela ukudedela imibono yakho? Uma ubambelela emazwini kaNkulunkulu awakhuluma endulo, ngabe lokhu kufakazela ukuthi uyawazi umsebenzi kaNkulunkulu? Uma ungakwazi ukwamukela ukukhanya kukaMoya oNgcwele namuhla, futhi kunalokho unamathele ekukhanyeni kwasendulo, ingabe lokhu kungafakazela ukuthi ulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu? Ingabe usehluleka ukudedela imibono yenkolo? Uma kunjalo, uzoba ngumuntu ophikisana noNkulunkulu.
Ngoba kuhlala kunokusha okuvelayo emsebenzini kaNkulunkulu, kunomsebenzi ophelelwa yisikhathi futhi uguge lapho kuqhamuka umsebenzi omusha. Lezi zinhlobo zomsebenzi ezehlukene, omdala nomusha, aziphikisani, kodwa ziyaphelelisana; isinyathelo ngasinye silandela esokugcina. Ngoba kunomsebenzi omusha, izinto zakudala kumele, nakanjani, zisuswe. Isibonelo, ezinye izinqubo zakudala kanye nokwakuvame ukushiwo umuntu, kuhlanganiswe nalokho umuntu abhekana nakho eminyakeni eminingi eyadlula kanye nezimfundiso, kwakhe yonke inhlobo yemibono emqondweni womuntu. Kodwa okuyimpumelelo enkulu ekwakhekeni lena mibono komuntu wukuthi uNkulunkulu usazobudalula ubuso Bakhe ngokugcwele kanye nesimo esiyisisekelo kumuntu, kuhlanganiswe nokwenabisa, eminyakeni eminingi, kwezimfundiso ezindala zangesikhathi sasendulo. Kungcono ukuthi, ngesikhathi sokukholwa komuntu kuNkulunkulu, umthelela wemibono ehlukahlukene uholele ekuqhubekeni kokwakheka nokuguquka kwakho konke ukuqonda uNkulunkulu kubantu, okwenze ukuthi abantu benkolo abaningi abasebenzela uNkulunkulu baphenduke izitha Zakhe. Ngakho, ukuqina kwemibono yenkolo kwabantu, kudala ukuthi baphikisane ngokwengeziwe noNkulunkulu, futhi baba yizitha ezinkulu zikaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uhlala umusha futhi awukaze ube mdala, futhi awukaze wakhe imfundiso futhi, kunalokho, uyaqhubeka nokushintsha futhi uzenze musha kakhulu noma kancane. Lo msebenzi uvezwa yisimo esiyisisekelo sikaNkulunkulu Uqobo. Futhi kuyisimiso esiyisisekelo somsebenzi kaNkulunkulu, kanti ungenye yezindlela uNkulunkulu afeza ngazo umsebenzi Wakhe wokuphatha. Ukuba uNkulunkulu bengasebenzi ngale ndlela, umuntu bengeke ashintshe noma akwazi ukumazi uNkulunkulu, futhi uSathane bengeke aze ahlulwe. Ngakho, emsebenzini Wakhe bekuqhubeka nokuba noshintsho olubonakala lwenzeka njalo, kodwa oluye lube ngolwesikhathi esithile. Indlela umuntu akholelwa ngayo kuNkulunkulu, nokho, yehluke kakhulu. Unamathela ezimfundisweni nasezinhlelweni ezindala, ezejwayelekile, futhi uma zizindala kakhulu zihlwabusa kakhulu kuye. Kungenzeka kanjani ukuthi umqondo onobuwula womuntu, umqondo ongaguquki njengetshe, wamukela umsebenzi omusha ongaqondakali kanye namazwi kaNkulunkulu? Umuntu uzonda uNkulunkulu ohlala emusha futhi ongakaze abe mdala; uthanda uNkulunkulu omdala kuphela, osekhulile, onezinwele ezimhlophe futhi omi ndawonye. Njengoba uNkulunkulu nomuntu banalokho abakuthandayo ngokwabo, umuntu usephenduke isitha sikaNkulunkulu. Okuningi kwalokhu kushayisana kusakhona nanamuhla, ngesikhathi lapho uNkulunkulu kade enza umsebenzi omusha ngaso esicishe sibe iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Ngakho-ke, kungaphezu kwesisombululo. Kungenzeka ukuthi kungenxa yenkani yomuntu, noma ubungcwele bemithetho yokuphatha kukaNkulunkulu okwenziwa umuntu—kodwa labo befundisi basabambelele ezincwadini nasemaphepheni amadala akhuntile, kube uNkulunkulu uqhubeka nomsebenzi Wakhe wokuphatha ongaphelele kube sengathi bekungekho muntu ongasohlangothini Lwakhe. Nakuba lokhu kushayisana kwenza uNkulunkulu nomuntu babe yizitha, futhi bangabi nakho ukubuyisana, uNkulunkulu akanandaba nhlobo, sengathi bebekhona kube bebengekho. Umuntu, nokho, usanamathela ezinkolelweni nasemibonweni yakhe, futhi akakudedeli nhlobo. Kube kunento eyodwa esobala: Yize umuntu engasuki ezenzweni zakhe, izinyawo zikaNkulunkulu zihlala zinyakaza futhi uhlala eshintsha izenzo Zakhe ngokwendawo, futhi ekugcineni, umuntu uyohlulwa engalwanga. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu uyisitha esikhulu kubo bonke abantu Bakhe abehluliwe, futhi ungumnqobi esintwini esehluliwe kanye nakulabo abasazokwehlulwa. Ubani ongaqhudelana noNkulunkulu bese enqobe? Imibono yomuntu kubukeka sengathi ivela kuNkulunkulu ngoba eminingi yayo yavela ekuqaleni komsebenzi kaNkulunkulu. Kube uNkulunkulu akamxoleli umuntu ngenxa yalokhu, noma, phezu kwalokho, akenzi ukuthi umuntu adunyiswe ngokukhiqizela “uNkulunkulu” imikhiqizo engaphandle komsebenzi kaNkulunkulu. Kunalokho, unengeka kakhulu ngemibono yomuntu kanye nezinkolelo ezindala, ezilungile, futhi akacabangi ngisho ukuvuma nosuku le mibono eyaqala ukuvela ngalo. Akakwamukeli nhlobo ukuthi le mibono yabangelwa umsebenzi Wakhe, ngoba imibono yomuntu isabalaliswa umuntu; umthombo wayo imicabango kanye nomqondo womuntu, futhi akuyena uNkulunkulu, kodwa uSathane. Inhloso kaNkulunkulu beyiselokhu ingeyokuthi umsebenzi Wakhe ube musha futhi uphile, ungabi mdala futhi ufe, nalokho enza ukuthi umuntu abambelele kukho kwahlukana ngokwenkathi nesikhathi, futhi akuyikho okwaphakade futhi okungashintshi. Lokho kwenziwa wukuthi Yena unguNkulunkulu owenza umuntu aphile futhi abe musha, kunodeveli owenza ukuthi umuntu afe futhi aguge. Ingabe anikakuqondi lokhu? Unemibono ngoNkulunkulu futhi uyehluleka ukuyidedela ngoba awufuni ukwamukela. Akusikho ukuthi kwenziwa ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu kancane, noma ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awuhambisani nezifiso zomuntu—noma, phezu kwakho konke, yingoba uNkulunkulu uhlala ebudedengu emsebenzini Wakhe. Ukuthi awukwazi ukudedela imibono yakho ngoba untula kakhulu ukulalela, futhi awunawo nomncane umfanekiso wesidalwa sikaNkulunkulu, futhi hhayi ngoba uNkulunkulu ekwenzela izinto zibe nzima. Konke lokhu kudalwe nguwe, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu; konke ukuhlupheka namashwa kudalwe umuntu. Izinhloso zikaNkulunkulu zihlala zizinhle: Akafisi ukukwenza uveze imibono, kodwa ukufisela ukuthi ushintshe futhi uguqulwe njengoba kuhamba iminyaka. Kodwa awukwazi ukubona umehluko, futhi uhlala ucubungula noma uhlaziya. Akusikho ukuthi uNkulunkulu ukwenzela izinto zibe nzima, kodwa ukuthi awunakho ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu, futhi ukungalaleli kwakho kukhulu kakhulu. Isidalwa esincanyana ngeke size silinge sithathe ingxenyana yalokho owawukunikwe uNkulunkulu ngaphambilini, bese siphenduka sihlasele uNkulunkulu ngakho—ingabe lokhu akukhona yini ukungalaleli komuntu? Umuntu, singasho ngokungachemi, akafanelekile nhlobo ukuveza imibono yakhe phambi kukaNkulunkulu, futhi akafanelekile ngokwengeziwe ukubukisa ngolimi lwakhe olungenamsebenzi, olunukayo, olubolile, oluqaphuzayo ngokuthanda kwakhe—ingasaphathwa eyaleyo mibono ekhuntile. Ayive iyinto engelutho kakhulu?
Buza le mibuzo ukuze uzigcine uphapheme: